ယနေ့မြောက်ဦးမြို့ နန်းတော်ရာကုန်းမှ သတင်း.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ယနေ့မြောက်ဦးမြို့ နန်းတော်ရာကုန်းမှ သတင်း..
ယနေ့မြောက်ဦးမြို့ နန်းတော်ရာကုန်းမှ သတင်း..
Posted by ဂျစ်စူ on Jun 4, 2011 in Myanma News | 17 comments
ယနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၃နာရီခန့်က မြောက်ဦးမြို့ နန်းတော်ရာကုန်းမှ သတင်း
မြောက်ဦးမြို့မှ ရရှိသော ၄ ပိသာ ၆၄ ကျပ်သားရှိ ဘုရားဆင်းတုတော် အပါအ၀င် အခြားရှေးဟောင်း ဆင်းတုတော်၂၇ ဆူကို နေပြည်တော်သို့ ယူဆောင်ရန် ညွှန်ကြားလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ ယနေ့ (သို့မဟုတ်) နက်ဖြန်ခါ ယူဆောင်တော့မည် ဖြစ်သည်။ မြောက်ဦးတွင် မြို့သူ မြို့သားများမှ နန်းရာကုန်းတွင် စုရုံးပြီး ဘုရားကို မယူဆောင်ရန် မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားနေကြသည်။ တချို့က အထူး မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြသည်ဟု သိရသည်။ ရုန်းရင်း ဆန်ခတ် ဖြစ်မည့် အနေအထားသို့ ရောက်ရှိနေသည်ဟု သိရသည်။ ယခုလူစုနေကြပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီး နောက်ဆုံးအခြေအနေအရ လူတော်တော်များလာပြီ ဖြစ်ကြောင်း နန်းတော်ရာကုန်းကို ၀ိုင်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်…။
အင်တာနက် ခဏ၀င်ကြည့်တာနဲ့အညာနွေ တမာမြေ မှာ အပေါ်က သတင်းလေး ဖတ်မိပါတယ်…သေချာသိချင်ရင်တော့ ဖုန်းဆက်မေးကြည့်ပေတော့..
သူကတော့ သတင်းရင်မြစ်ကို နေရဉ္စရာ သို့ ညွန်းထားတဲ့အတွက်..ကျနော်လဲ အဆိုပါ နေရဉ္စရာ သတင်း ဋ္ဌာန သို့ သွားပြီး.. တစ်ချို့ စာဖတ်သူတွေမသိသေးလောက်ဘူးထင်တဲ့ ရှးဟောင်း ဆင်းထုတော် ဘုရား တွေ့ ရှိခဲ့ပုံကို ဆက်လက်ပြီး ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ရခိုင်ရှေးဟောင်းမြို့တော် မြောက်ဦးမှ ရွှေအလေးချိန် ၄ ပိသာ ၆၀ သားရှိ ရှေးဟောင်း ဆင်းထုတော် တစ်ပါး တူးဖေါ် ရရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့မှ ဥာဏ်တော် ၁၂ လက်မ ခန့် အရွယ် ရွှေ အလေးချိန် ၄ ပိသာ ၆၀ ကျပ်သားရှိ ရှေးဟောင်း ရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူကို တူးဖေါ် ရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ ဘုရား ဂေါပက တစ်ဦးက ဘုရား တူးဖေါ်ရရှိကြောင်း ကို ယခုကဲ့သို့ ပြောကြားသည်။
“ စုစုပေါင်း ဘုရားက ၃၇ ဆူ တူးဖေါ်ရရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲက ဘုရားတစ်ပါးက ရွှေအတိ ဖြစ်ပြီး ၄ပိသာနဲ့ ၆၀ ကျပ်သား ရှိပါတယ်။ မြောက်ဦး ရတနာ သိမ့်ခ ဘုရားရှိ လောက မဉ္ဖူ စေတီတော်အား ပြန်လည် ပြုပြင်ရန်အတွက် တူးဖေါ်ရာက တွေ့ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။”
အဆိုပါ ရွှေဆင်ထုတော်အား ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမူ အနုပညာမှ ထိန်းသိမ်းထားပြီး ဘုရား တန်ဖိုးကြီးမားသဖြင့် မြောက်ဦးဘဏ်တွင် သိမ်းဆည်းထားကြောင်း သူက ပြောသည်။
“ ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမူ ဦးစီးဌာနရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ရတနာသိမ်ခ ဘုရားမှာ ရှိတဲ့ ဒေါက်တာ ဦးသိန်းထွန်း လင်မယား လှူဒါန်းတဲ့ စေတီတော် တဆူကို တူးဖေါ်ရာကနေ တွေ့ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေလ ၃၀ နေ့ ညနေ ၄ နာရီခွဲခန့်မှာ တွေ့ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါ ဘုရားများအား တူးဖေါ် တွေ့ရှိပြီးနောက် ရခိုင်ပြည်နယ် ယဉ်ကျေးမူ ၀န်ကြီး ဦးအောင်သန်းတင်အား ဆရာကြီး ဦးဦးသာထွန်းသားဖြစ်သူ ရှေးဟောင်း သုတေသနမှူး ဦးကျော်ထွန်းအောင်မှ အကြောင်းကြားပြီး စစ်ဆေးရာမှ ရွှေဘုရား ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်ဟု ဦးကျော်ထွန်းအောင်၏ ဇနီး ဖြစ်သူက အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
“ ဆရာက အလုပ်များနေတဲ့ အတွက် အပြင်ကို ရောက်နေပါတယ်။ ဘုရားကို တူးဖေါ်တွေ့ရှိတာက မှန်ပါတယ်။ ဘုရားပြုပြင်ဖို့ တူးဖေါ်တဲ့ အခါ ဌာပနာ ထည့်ထားတဲ့ သေတ္တာတလုံးကို တွေ့ပါတယ်။ အဲသေတ္တာထဲက စုစု ပေါင်း ဘုရား ၃၇ ဆူ ရပါတယ်။ အဲဒီ အထဲက အကြီးဆုံး ဘုရားကို ယဉ်ကျေးမူ ၀န်ကြီး ရောက်တဲ့ အခါ စစ်ဆေးကြည့်တော့ ရွှေဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အလေးချိန် ၄ ပိသာနဲ့ ၆၀ ကျပ်သား ရှိပါတယ်။ အခု ဘုရားကို လုံခြုံတဲ့ နေရာမှာ ထားပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ဘုရားတွေကိုတော့ မြောက်ဦးပြတိုက်မှာ ထားပါတယ်။ အဲဒီဘုရားတွေကတော့ ရွှေလား၊ ငွေလားဆိုတာကို မစစ်ဆေးရသေးပါဘူး” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ဘုရားကို တူးဖေါ် တွေ့ရှိပြီးနောက် မြောက်ဦး မြို့သားများ၏ ဆန္ဒကို မေးကြည့်ရာ ဘုရား ဂေါပက လူကြီးက ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
“ ဘုရားတွေကိုတော့ နဂို ဘုရားမှာဘဲ ဌာပနာချင်ပါတယ်။ ရရှိတဲ့ ရွှေဘုရားကိုတော့ တန်ဖိုး အလွန်ကြီးမားတဲ့ အတွက် ဌာပနာ ပြန်မတည်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း မြောက်ဦးမြို့မှာဘဲ အစောင့်အရှောက်တွေနဲ့ သိမ်တော် တဆောင်ဆောက်ပြီး ကိုးကွယ် ဖို့ မြောက်ဦးမြို့ခံတွေက အလိုရှိပါတယ်။ မြောက်ဦးက ရရှိတဲ့ ဘုရား မြောက်ဦးမှာဘဲ ထားချင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
မြောက်ဦး မြို့ခံများအနေဖြင့် အဆိုပါ ဘုရားကို အာဏာပိုင်များက သိမ်းဆည်းပြီး ဗမာပြည်ကို ယူဆောင်သွားမည်ကို အထူး စိုးရိမ်နေကြောင်း သိရသည်။
နောက်ဆုံးသတင်းအရ – နေပြည်တော်မှ မတရားလုပ်ရပ်အား ဆန္ဒပြမှုတွင် မြောက်ဦးမြို့ နေ လူထုများ၊ ဆရာတော်ကြီးများအပါအ၀င် လူဦးရေသောင်းချီ ပူးပေါင်းပါဝင်သည့်အပြင် လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ (RNDP) မှ အဖွဲ့ ဝင်များပါ ပါရှိနေကြောင်း သိရှိရပါတယ်။Credit to Nicknayman
ထဲက ဗမာပြည်ကို ယူဆောင်သွားမည် ဆိုတဲ့ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းကို မနှစ်မြို့ဘူးဗျာ။
အရိုးစွဲနေပီ တော်ကြာသဂျီးက ဘာပုတယ် ညာပုတယ် ဝင်လုပ်နေအုံးမယ်နော် ..
တိုင်းရင်းသားတွေရဲ.ခံစားမှုကို တိုင်းရင်းသားဖြစ်မှပဲ ခံစားတတ်ကြမှာပါ။ အရာရာမှာအကြောင်းတရားတရားတွေကိုယ်စီရှိကြတယ်ဗျ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် မကြုံဖူးလို.မခံစားဖူးတာကို အမြင်ကျယ်သလိုလိုတော့ လာပီးတော့ တော်ကီမချွေစေချင်ပါဘူးခမျာ။
အမှန်မှာ ချာတူးကလည်း အဲလိုမပြောသင့်သလို အာဖျံကွီးကလည်း အဲသလို မရေးသင့်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ချာတူးက ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ အာဖျံကွီးကလည်း ပြန်ပြောနိုင်တာပေါ့။ အဲဒီအခါ ချာတူးကလည်း ပြည့်စုံသွားအောင်ထပ်ပြောရင် အာဖျံကွီးကလည်း နောက်ထပ်ပြန်ချေပနိုင်မယ်၊ အဲတော့ ပြန်ပြောရင်း ပြန်ချေရင်းနဲ့ ထပ်ပြောမိကြမယ်၊ အဲဒီတော့ ပြောသူနဲ့ပြန်ပြောသူ ပြောကြဆိုကြဖြစ်မယ်။ ပြောသူမှာ အပြစ်မရှိသလို့ ပြန်ချေပသူမှာလည်း အပြစ်ကင်းပါတယ်။ ပြောတယ်ဆိုတာ အားစိုက်ရသလို ပြန်ပြောသူအတွက်လည်း မလွယ်ဘူး။ ပြောမယ့်သာပြောတာ ပြောခြင်းဆိုတဲ့ အတတ်ပညာကို ပြောပြလို့ ကုန်နိုင်မယ်မထင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့လည်း ပြောနေမိတာ ပြောလို့ပြောမှန်းမသိဘူး။ မပြောတော့ဘူး မပြောတော့ဘူးနဲ့ ပြောပြောနေတာ တွေ့ကြဘူးမှာပေါ့။ အခုလည်း ပြောရင်းနဲ့ စာလုံးပေါင်းအမှန်က ‘ပြော’ လား ‘ပျော’ လား မပြောတတ်တော့ဘူး၊ ပြောကြပါအုံး…….
ကျနော်လဲ စစဖတ်ချင်း တော့သတိထားမိပါတယ်.
သတင်းရေးသူပဲ မှားရေးမိသလားလို့ ..
ဘာသဘောလဲ တော့ မသိ
ဒေသခံပြည်သူတွေ ၀ိုင်းဝန်းကန့် ကွက်ကြလို့ဘုရားကို နေပြည်တော့သို့အပို့ မခံရတော့ပါဘူး
ရတနာ့မာန်အောင် ဘုန်းကြီးကျောင်မှာပဲ တည်ထားလျက် ဖြစ်ပါတယ်
ဒေသခံတစ်ယောက်ရဲ့ပြောကြားချက်ကို ဒီအောက်မှ တစ်ဆင့် နားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ
တိုင်းရင်းသားတော်တော် များများ ကတော့ ဗမာ ပြည၊် ဗမာ အစိုးရလို့ သုံးနေကြတာ ခဏ ခဏ ကြားနေတာပါပဲ။
အင်းလေ !! ရန်ကုန်ကနေ မန်းတလေး အထိသာပဲ အဲ့နားကျော်သွားတာနဲ့ ဗမာပြည်လို့ တိုင်းရင်းသားတွေသုံးကြတာပဲလေ …….. ရှမ်းပြည်ဆို ပိုဆိုး
၀ုတ်ပါ့ ၀ုတ်ပါ့ … သောက်ဖော်သောက်ဖက်တွေပါ .. အေ့ ..
ဆက်လက်တူးဖော်ရာ ဘုရားအပါးပေါင်း ၂၀၀ ကျော်သွားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
အားလုံးမှာ ရွှေဆင်းတုတော်များဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပီး ရွှေပိသာချိန်စုစုပေါင်းကို မသိရှိရသေးပါ။
ဘယ်ခေတ်ကလဲဆိုတာရော မသိကြဘူးလား။ ဒီအချိန် ဒေါက်တာသန်းထွန်းကိုလွမ်းတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ သဂျီးလေသံဖြင့်ဖတ်ပါ
ပြီးရင် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဈေးနှုန်းရယ်
ရှေးဟောင်းရွှေထည်တွေရဲ့လက်ခတွေကို ဖြတ်ပြီး ရောင်းစားပလိုက်
ရတဲ့ငွေတွေနဲ့ ဆေးရုံတွေဆောက် စာသင်ကျောင်းတွေဆောက်
ဘုရားပွင့်လာလို့ လူတွေ ချမ်းသာလာသလိုမျိုးတောင်ဖြစ်ဦးမှာ
အထူးမှတ်ချက်။ ။ အဆိုပါ အစီစဉ်ဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါက ဘဏ္ဍာထိမ်းရာထူးနှင့်အထူးထိုက်တန်သူမှာ
ကျွန်ုပ် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု သည်သာလျှင် ဖြစ်ပါကြောင်း :D :D :D
အဟီး ရုပ်ပွားတော်ဓာက်ပုံလေးတွေ ထည့်ပေးလို့ မရဘူးလား။ ကျနော်ကတော့ မရိုက်ရဲပေမဲ့ သူများရိုက်ပေးတာကိုတော့ ကြည့်ချင်ပါတယ်။
ရှေးဟောင်းဘုရား နေပြည်တော်သို့ မပင့်၍ ရခိုင်လူထု ဝမ်းမြောက် – ခင်ဦးသာ Tuesday, 07 June 2011 14:14
မကြာသေးခင်က တူးဖော်ရရှိခဲ့သော ရခိုင် ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓ ဆင်းတုတော်များအား မြန်မာအစိုးရသစ်က နေပြည်တော်သို့ သယ်ယူမည့် အစီအစဉ်ကို တားဆီးလိုက်နိုင်သည့်အတွက် ရခိုင်လူထုက ဝမ်းမြောက်ပီတိ ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေ၌ ရွှေဆင်းတုတော် တဆူနှင့်အတူ ဆင်းတုတော်ပေါင်း ၃၇ ဆူအား မေလ ၃၀ ရက်နေ့က တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
တူးဖော်ရရှိခဲ့သော ရှေးဟောင်း ဆင်းတုတော် အားလုံးမှာ အေဒီ ၈ ရာစု၊ ဝေသာလီခေတ်က ဆင်းတုတော်များ ဖြစ်သည်ဟု ရှေးဟောင်းသုတေသန ဦးစီးဌာန၏ အငြိမ်းစားဒု-ညွှန်မှူးတဦးဖြစ်သည့် မြောက်ဦးမြို့ခံ ဦးကျော်ထွန်းအောင်က ပြောသည်။
ရှေးဟောင်း ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်သည် ရွှေချိန် ၄ ပိဿာနှင့် ၆၄ ကျပ်သား အလေးချိန်ရှိသည်ဆိုသည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး နောက်တနေ့တွင် နေပြည်တော်သို့ သယ်ယူရန် အာဏာပိုင်များက ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ဒေသခံပြည်သူများက ဇွန် ၄ ရက်နေ့တွင် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ခြင်းကြောင့် သယ်ယူမည့်အစီ အစဉ်ပျက်သွားခဲ့သည်။
ရွှေအစစ်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့သော ဗုဒ္ဓဆင်းထုတော်ကို ထပ်မံစစ်ဆေးခဲ့ရာ ကြေးတချို့ပါဝင်နေကြောင်း သိရသည်။
“ဒေသခံတွေရဲ့ ဆန္ဒအရ မြောက်ဦးမြို့မှာပဲ တည်ထားကိုးကွယ်သွားဖို့ လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ ရှေးဟောင်းပုံစံ မပျက်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ ကျနော့်ဆန္ဒလည်း အဲဒီလိုပဲ ကိုယ့်ဒေသမှာပဲ ထားချင်ပါတယ်” ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး ဦးအောင်သန်းတင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ရှေး ရခိုင်ဘုရင်များ ထီးနန်းစိုးစံခဲ့ရာ မြောက်ဦးမြို့၌ ရှေးဟောင်း လက်ရာ ဘုရား၊ ပုထိုးစေတီများနှင့် ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံ ထောင်ပေါင်းများစွာ ရှိနေပြီး တချို့သော စေတီပုထိုးများ၊ အဆောက်အအုံများမှာ ပျက်စီးနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရက မြောက်ဦးမြို့ကိုဖြတ်၍ ဖောက်လုပ်နေသော မီးရထားလမ်း အတွက်လည်း ရှေးဟောင်း စေတီ ပုထိုးများနှင့် အဆောက်အအုံတချို့ကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်းက ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်က ရခိုင်နိုင်ငံတော်အား ဗမာဘုရင်က သိမ်းပိုက်၍ ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ အထွဋ်အမြတ်ထားရာ မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော် ဘုရားကြီးကို ရခိုင်နိုင်ငံတော်မှ အမရပူရ မြို့တော်သို့ သယ်ဆောင် သွားခဲ့သည်။
ယခု ဖြစ်စဉ်သည် ရှေးရခိုင် သမိုင်းကြောင်းအား ပြန်ပြောင်း သတိရစေခဲ့ကြောင်း မြောက်ဦးမြို့ခံတချို့က ပြောသည်။
“နေပြည်တော်ကို သယ်ယူမယ့် အစီအစဉ်ကို ကန့်ကွက်နိုင်ခဲ့တာဟာ ကျမတို့ဒေသခံ ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့အောင်မြင်မှု ရလဒ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် မဟာမုနိ ဘုရားကြီးကိုလည်း မြောက်ဦးကို အမြန်ဆုံး ပြန်ရောက်စေချင်တယ်” ဟု အသက် ၆၉ နှစ်အရွယ် မြောက်ဦးမြို့ခံ အငြိမ်းစား ကျောင်းဆရာမကြီး တဦးက ဆိုသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက ယခု တူးဖော်ရရှိသည့် ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော် ရွှေစစ်ခြင်း၊ မစစ်ခြင်းက အရေးမကြီးကြောင်း၊ ရခိုင်လူမျိုးများ၏ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ် ဖြစ်သောကြောင့် ဤမြေ၌ပင် ထားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
“ကျမတို့ရဲ့ရှေးဟောင်း အမွေ မှန်သမျှကို အသက်ပေးပြီး ကာကွယ် စောင့်ရှောက် သွားမှာပါ” ဟု သူက ဆိုသည်။
အာဏာပိုင်များက အာဏာအားကိုးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေများကို ဖျက်စီးလေ့ရှိကြောင်း၊ ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးမည်ဆိုသည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ယူဆောင်သွားကာ ပြန်မပို့တော့ကြောင်း အငြိမ်းစား ကျောင်းအုပ်ဆရာမ ကြီးက ဆက်ပြောသည်။
သူက “ဒါတွေကို မကန့်ကွက်ဘူးဆိုရင် နောက်ပိုင်းကျ အုတ်ခဲကျိုးတွေတောင် သယ်သွားတော့မယ့် အနေအထားနဲ့ ရင်ဆိုင် ရနိုင်တယ်” ဟု ဆိုသည်။
ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော် များအား ယခုအခါ မြောက်ဦးမြို့ရှိ ရတနာ့မာန်အောင် ကျောင်းတိုက်၌ ထားရှိရာ ဒေသခံ အများအပြား လာရောက် ဖူးမျှော်နေကြကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော် အားလုံးကို သာသနာ့ ဗိမာန် တခုတည်ဆောက်၍ တည်ထား ကိုးကွယ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရတနာ့ မာန်အောင် ကျောင်းတိုက်မှ ဆရာတော် တပါးက ဧရာဝတီကို မိန့်ကြားသည်။
“အခု ဘုန်ကြီးကျောင်းမှာပဲ အပူဇော်ခံထားပါတယ်။ ဒေသခံတွေက တအားကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ လာရောက် ဖူးမျှော်နေကြတယ်။ နေပြည်တော်ကို သယ်ယူဖို့ နောက်တကြိမ် လုပ်လာမလား ဆိုပြီးလည်း တချို့က စိုးရိမ်နေဆဲပါ” ဟု
ရခိုင်ပြည်သူ လူထုက ဒေသတွင်းရှိ ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်နေကြသော် လည်း အာဏာပိုင်များသည် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှ ယဉ်ကျေးမှု အမွေများကို တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်စေရန် လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု အတိုက်အခံ ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမား ဦးအေးသာအောင်က ပြောသည်။
“ရခိုင်ပြည်က ရှေးဟောင်း ဘုရားတွေ၊ ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းတွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ယူနေတာ ကုန်သလောက်ဖြစ်ပြီ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ရှေးရခိုင် ဘုရင်များသည် ရခိုင်နိုင်ငံတော်အဖြစ် တည်ထောင်ကာ မြောက်ဦးမြို့၌ နန်းစိုက်၍ မင်းအဆက်ဆက် အုပ်ချုပ်လာခဲ့ သော်လည်း ၁၇၈၄ ခုနှစ်တွင် ဗမာဘုရင် ဘိုးတော်ဘုရား ခေါ် ဘိုးတော်ဦးဝိုင်း လက်ထက်က ၎င်း၏ သားတော်ကြီး ဦးဆောင်သော တပ်များက သိမ်းပိုက်ခဲ့၍ ရခိုင်နိုင်ငံတော် တခုလုံး ကျဆုံးခဲ့ပြီး ရခိုင်လူမျိုးများ၏ အထွဋ်အမြတ်ထားရာ မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော် ဘုရားကြီး ကိုလည်း သယ်ဆောင် သွားခဲ့သည်။
ထိုအချိန်က ရခိုင်နိုင်ငံတော်အား အုပ်ချုပ်နေသူမှာ ဘုရင် မဟာသမ္မတရာဇာ ဖြစ်သည်။ ဘိုးတော်ဦးဝိုင်းသည် ရခိုင် နိုင်ငံတော်အား သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် အပိုင်း ၄ ပိုင်း ခွဲခြား၍ မြို့စောင့်တပ် ၄ ခု ထားရှိကာ အခွန်အခများ ကောက်ခံ၍ အမရပူရမြို့ နေပြည်တော်သို့ ဘဏ္ဍာငွေများ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရသည်။
အင်္ဂလိပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်စဉ်က ယူဆောင်သွားသော သီဟာသန ပလ္လင်အား လွပ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင် ပေးခဲ့သကဲ့သို့ ရခိုင်ပြည်သူများကလည်း မဟာမုနိ ဘုရားကြီးကို ရခိုင်ပြည်နယ်သို့
ပြန်လည် ပို့ဆောင်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်သူများက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီ စနစ်သို့ ကူးပြောင်းရန် လုပ်ဆောင်နေသည့် အတွက် မဟာမုနိ ဘုရားကြီးအား ရခိုင်ပြည်သို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ပေးပါက ကောင်းမွန်သော လုပ်ရပ်တခုဖြစ်မည်ဟု ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ (RNDP) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေးမောင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“သမိုင်းဝင်တဲ့ အရာတွေကို သူ့နေရာမှာ သူ့အတိုင်းထားတာဟာ အကောင်းဆုံးပါ။ သီဟာသန ပလ္လင်ကြီးတောင် မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ပေးခဲ့တာပဲ။ မဟာမုနိကို ပြန်ပြီး ပို့ပေးသင့်တယ်။ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးရေး ဆိုတာက ပါးစပ်က ပြောနေရုံ၊ စာရွက်တွေနဲ့ ပြောနေရုံနဲ့ မရဘူး” ဟု သူက ဆိုသည်။
ဘီစီ ၅၄၃ မတိုင်မီနှစ်များက ဓညဝတီပြည်ဘုရင် စန္ဒသူရိယမင်းကြီး သွန်းလုပ်ပူဇော်ခဲ့သော မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော် ဘုရားကြီးကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၄၆ တပေါင်းလတွင် ဘိုးတော်ဘုရား၏ သားတော်ကြီး အိမ်ရှေ့ ဥပရာဇာ ရွှေတောင်မင်းက တောင်ကုတ်လမ်းမှ ပန်းတောင်း၊ ထိုမှ ဧရာဝတီ မြစ်အတိုင်း ပင့်ဆောင်ခဲ့ရာ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၄၇ ခုနှစ် ကဆုန်လတွင် အမရပူရနေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်၊ မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော်မြတ်သည် နှစ်ပေါင်း ၂၃၂၈ နှစ်တိုင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ သီရိဂုတ္တ တောင်တွင် စံတော်မူခဲ့၍ မန္တလေးတွင် နှစ် ၂၀၀ ကျော်ကြာ စံတော်မူခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်ဟု နေထွတ်ပြုစုသော မန္တလေး အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသည်။